Kedu ihe kpatara obere mgbanwe na nkwalite azụmaahịa azụmaahịa CPG nwere ike ibute nnukwu nsonaazụ | Martech Zone
Ihe kpatara obere mgbanwe na nkwalite azụmaahịa azụmaahịa CPG nwere ike ibute nnukwu nsonaazụ
Friday, April 21, 2017 Sunday, Eprel 23, 2017 Terry Ziegler
Ngalaba Azụma Ahịa bụ oghere ebe nnukwu itinye ego na nnukwu volatility na-ebute oke mgbanwe na aha nke ịba uru na uru. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ dị ka Unilever, Coca-Cola, na Nestle kwupụtara na nso nso a ịhazigharị na ịhazigharị iji kwalite uto na ịchekwa ego, ebe a na-eto ndị na-emepụta ngwa ahịa na-ere ahịa dị ka ndị na-agagharị agagharị, ndị na-eme njem ọhụụ na-enwe ọganiihu na nnweta. N'ihi ya, a na-ebute itinye ego na atụmatụ njikwa ego nke nwere ike imetụta uto ala ngwa ngwa.
O nweghi ebe nyocha kariri n'ahịa azụmaahịa ebe ụlọ ọrụ na-ere ngwa ahịa na-etinye ihe karịrị pasent 20 nke ego ha na-enweta naanị ịhụ ihe karịrị 59 pasent nke nkwalite anaghị arụ ọrụ dịka Nielsen si kwuo. Ọzọkwa, Otionlọ Ọrụ Nkwalite Nkwalite atụmatụ:
Afọ ojuju gburugburu ikike ijikwa mgbasa ozi azụmaahịa yana iji mezuo na mkpọsa ahịa ajụla ma ugbu a ọ dị 14% na 19%, n'otu n'otu na ha 2016-17 TPx na Nkwupụta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi.
Site na nsonaazụ ndị dị egwu dị otú a, mmadụ nwere ike iche na azụmaahịa azụmaahịa nwere ike ịdaba na mgbanwe ọzọ na-agbanwe na ụlọ ọrụ CPG, mana nke bụ eziokwu bụ na imeziwanye nkwalite azụmaahịa ekwesịghị ịchọ usoro dị egwu, ndị mmadụ na ngwaahịa mmegharị chọrọ site na usoro mmezi ndị ọzọ. Kama nke ahụ, ụzọ maka njikarịcha nkwado ahịa na-edobere ya na obere mgbanwe nwere ike ịnwe mmetụta dị mkpa ma na-adigide.
Kpebisie ike ka mma
N’ụwa ebe ụlọ ọrụ na-etinye nde kwuru nde dọla n’ọkwa na-adịghị arụ ọrụ, ọbụlagodi imepe pasent ga-agbakwunye ọfụma. O bu ihe nwute, otutu ulo oru edeputala nkwalite ahia dika mpaghara nke ego di nkpa kama ịju onwe ha otu uzo di mfe -
Ọ́ bụrụkwanụ na m mere ka otu mgbanwe gaa n’otu nkwalite n’otu ụlọ ahịa?
Site na enyemaka nke njikarịcha nkwado nkwalite ahịa zuru oke, azịza ya bụ nkeji oge na KPI ndị nwere ike ịkọwapụta gụnyere uru, olu, ego na ROI maka ndị nrụpụta na ndị na-ere ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ngwaahịa A na-agba ọsọ na nkwalite na 2 maka $ 5, kedụ mmetụta ọ ga-enwe ma ọ bụrụ na mgbasa ozi a na-agba ọsọ na 2 maka $ 6? Ike itinye amụma nchịkọta ịmepụta ọbá akwụkwọ nke ihe omume ndị a "ọ bụrụ na" na ọnụọgụ ọnụọgụ na-ewepu atụmatụ dị n'azụ ịkwalite nkwalite ma kama iji nghọta dị oke mkpa wee gbakọọ NT BKWU ỌZỌ.
Ekwela “Amaghị m” maka Azịza
Nkwalite a ọ gbara? Nkwalite a ọ dị irè? Atụmatụ ndị ahịa a ọ ga-emefu ego?
Ndị a bụ ajụjụ ole na ole ndị ụlọ ọrụ na-azụ ngwaahịa na-agbasi mbọ ike ịchọta azịza ha n'ihi data ezughị ezu, ezighi ezi ma ọ bụ nke a na-apụghị ịghọta. Agbanyeghị, emesịrị ma nwee ntụkwasị obi ma emee nchịkọta bụ isi nkuku nke mkpebi ịme data nke na-eduzi usoro nkwalite ahia.
Iji mezuo nke a, otu dị iche iche ga-ewepụ akwụkwọ ntụpọ ntụpọ na-adịghị mma dị ka ngwá ọrụ maka ikpokọta na nyochaa data. Kama nke ahụ, ndị otu kwesịrị ileba anya na njikarịcha nkwalite azụmaahịa nke na-anapụta ụlọ ọrụ ọgụgụ isi na-enye otu ụdị nke eziokwu mgbe a bịara n'ịhụ na ịgbakọ nkwalite azụmahịa ROI. Na nke a, ụlọ ọrụ ga-enwetaghachi uche ha mgbe ha na-achọ ihe ọmụma iji nyochaa arụmọrụ na usoro iji bulie nsonaazụ. Okwu a, ị nweghị ike idozi ihe ị na-agaghị ahụ, abụghị naanị eziokwu ma a bịa n'ọkwá azụmaahịa, mana ọ dịkwa oke ọnụ.
Cheta, Ọ Bụ Nke Onwe
Otu n'ime ihe mgbochi kasịnụ ịzụ ahịa azụmaahịa bụ ịlụ ọgụ na anyị emeela ya otu a echiche. Ọbụna obere mgbanwe na usoro n'aha mmelite nwere ike ịbụ ihe siri ike na ọbụlagodi egwu mgbe ha anaghị adaba na ebumnuche nhazi na nke onwe. Na Ntuziaka Ahia maka Njikwa Nkwado Azụmaahịa na njikarịcha maka Ahịa Ahịa Ahịa, Ndị nyocha Gartner Ellen Eichorn na Stephen E. Smith na-atụ aro:
Jikere maka njikwa mgbanwe iji chọọ mgbalị dị mkpa. Kpalie omume ndị ịchọrọ ime site na ịkwalite mkpali na usoro, nke nwere ike bụrụ akụkụ kachasị nke mmejuputa gị.
N'otu aka, ọ nwere ike ịdị ka ọ bụ enweghị ọgụgụ isi na-egosi na itinye n'ọrụ njikarịcha azụmaahịa bụ obere mgbanwe. Agbanyeghị, n'adịghị ka itinye ego na teknụzụ ndị ọzọ, itinye n'ọrụ na ịhụ uru sitere na a Ọganihu Nkwalite Azụmaahịa (TPO) ngwọta kwesịrị ime n'ime izu 8-12. Ọzọkwa, site na okike, ihe ngwọta TPO bara uru naanị dị ka ikike nke nzukọ nwere ike ịmetụta ma kwado mmetụta dị n'usoro ma si otú a na-eme ka ego ahụ kwụsị ọtụtụ oge.
Ezigbo ihe dị iche ma ọ bụrụ na ịkwalite nkwalite azụmaahịa, nke na-ekewapụ ya na atụmatụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, bụ na ọ bụghị maka iweta ihe ọhụrụ, mana maka itinye ego na mma. Nkwalite ndị ka mma, omume dị mma, nsonaazụ kacha mma.
Tags: coca-colaIgwe okwuNkwalite azụmaahịa CPGNestlenielsenOtionlọ Ọrụ Nkwalite Nkwalitengwọta tpoNjikwa ahia AzụmaahịaAzụmaahịa AzụmaahịaỌganihu Nkwalite AzụmaahịaUnilever
Terry Ziegler bụ onye isi na ngalaba-guzobere Ngwọta T-Pro. N'ihe karịrị afọ 30 nke njikwa ngwongwo ndị ahịa (CPG) maka njikwa ahịa, ahịa ndị ahịa, njikwa ụdị, ire ahịa na ego na ndu na njikwa na RJR / Nabisco, Borden Foods, Ndị Ọrụ Ugbo Mmiri nke America, Synectics Group na AFS Teknụzụ; Terry jikọtara ngwa ọhụụ na onye ndu.